BBC-da Laabta Somali-gu Prof Axmed Ismaciil Samatar ma Somaliland nimada ayay ku nacday ? |
BBC-da Laabta Somali-gu Prof Axmed Ismaciil Samatar ma Somaliland nimada ayay ku nacday ?
BBC Somali Prof Axmed Ismaciil Samatar ma Somaliland nimada ayay ku nacday ? ​Laanta BBC Somali waxa aynu ka wada warhaynaa ,in wakhti aad u badan ay siin jirtay waraysiyada Prof Axmed Ismaciil Samatar ,wakhtigii uu ahaa nin aad u taageersan qadiyada iyo midnimada waxa loo yaqaano Somali-weyn,balse Axmed Ismaciil markii uu tageeray gooni isu taaga Somaliland, waxa ay BBC Somali go-aan satay in ay Axmed Ismaciil aanay waraysiyo ka qaadin.
BBC Somali in ay kala xigsanayso Somaliland iyo Somaliya waxa aad ka garanaysaa ficilada iyo dhaqada ay samaynayaan,Axmed Ismaciil waxa uu ahaa ninka kaliya ee markasta ka hadli jiray eedacada BBC Somali,kuwaasi oo markasta u diyarin jiray warasiyo iyo barnaamijyo ay Axmed Ismaciil kaga waraysanayaan xaalada Somaliya iyo fikirkii uu markaasi ka aaminsanaa Somaliland, taasi oo ah mid ay shaqalaha BBC Somali aad ula dhacsanayeen.
Axmed Ismaciil wakhtigaasi aan sheegaayo ee uu aadka u tageersanaa qadiyada Somali-weyn waxa ay waraysiyada ay markasta BBC du ka qaadi jirtay ay ahayd kuwo u badan mucaradada Somaliland taasi oo markasi dad waynahu u arkayay in ay tahay arin ay BBC Somali ay ku raaxaysan jirtay.
Wakhtiyada qaar BBC Somali ,waxa ay Axmed Ismaciil Samatar waraysan jireen todobaad kasta,xataa waxa ay gadheen heer ay mararka qaar ka waraystaan qadiyado ka bacsan arimaha dadka Somalida.
Hadaba waxaa waayadan danbe si aan gabasho lahayn waxaa usoo shaac baxday xantii iyo xuuraankii lagu xaman jiray in ay sahaqalaha BBC Somali madaxdoodu ay kasoo horjeedo gooni isutaaga Somaliland ,taasina waxaa kuu cadayn kara BBC Somali oo gabi ahaanba joojisay waraysiyadii ay la leeyalan jirtay Axmed Ismaciil Samatar.
Laanta BBC Somali waxa ay wakhtigan xaadirka ah waraysiyadeedii ay u wareejisay ,walaalkii Cabdi Ismaciil Samatar ,oo isagu inta badan tageera midnimada Somaliweyn,taasi oo BBC Somali markasta u ah halbeegooda.
Hadii ay dhacdo in Cabdi Ismaciil hadii uu bari Somaliland uu tageero ,waxa kaliya ee BBC Somali laga fishaa waxa ay tahay in ay radiyaan cidkale oo deegaan ahaan kasoo jeeda Somaliland balse la fikir iyo rayi ah Muqdisho.
Dad badan ayaa waxa ay u haystaan in BBC Somali ay tahay Iidacad iyo Raadhyow dadka Somalida u dhexdhexaad ah,balse waxaa muuqata in markasta ay yihiin kuwo si wada jir ah ugasoo horjeeda gooni isutaaga Somaliland.
BBC Somali waxa ay soo martay wakhtiyo iyo xiliyo ay dadka Somalida ah ay dhex dhexaad u ahayd,taasina inta badan waxaa sabab u ahaa ka shaqaybta iyo waaya-aragnimada dadka aqoonta u leh warbaahinta.
Hadaba wakhtiyadan danbe oo dhalinyaradii inta badan iyagu ku shaqaysan jiray baraha warbaahinta ee Websityada, ayaa waxa ay fursado shaqooyin ka heleen idacadaha BBC Somali iyo Idacada uu Maraykanku leeyahay gaar ahaan qaybta afka Somaliga ee loo yaqaano VOA Somali.
Somaliland waa Somali ,dadka badankiisabna inta badan waxaa iskaga qaldan Soomaliya iyo magaca Somali,taas awadeed ayaa xataa waxaa dhacday in dad badan iyagu ay kala sari la yihiin Somali iyo Soomaliya.
Kalmada Somali waa jinsiyada iyo waxa aynu wada nahay ,balse erayga Soomaliya waxa uu ka turjumayaa dawlad iyo maamul,waana mida ay maanta dad badani ay isku qaldayaan,sida shaqalaha BBC Somali iyo VOA Somali.
Hadaba waxa aan kula talin lahaa labadaasi idacadood dadka ka shaqeeya,waxa fiican in aad ogataan cida aad wararka u tabisaan in ay tahay dadka ku abtirsada Magaca afka Somaliga ama dadka ay jinsiyadoodu ay tahay Somali, balse ma tihidin dad gobol iyo deegaan gaar ah u shaqeeya.
Waxa aan qoraalkaygan kusoo gaba-gabaynaya ,Prof Axmed Ismaciil Samatar,aqoontii iyo waxgaradnimadii aad hore ugu ogaydeen hadaba waa uu leeyahay,ma jirto wax iska badalay aan ahayn in uu ku qanci waayay siyasadii dawlada Muqdisho ,kuna qancay kana raali noqday siyasada gooni isutaaga Somaliland,taas awadeedna ma fiicna in aad ku coladisaan.
Waxa kaloo aan kula talin lahaa labadaasi Idacadood in ay iska hagaajiyaan qoraladooda afka Somaliga,oo inta badan mararka qaar aadan akhriyo karayn waxa ay ka hadlayaan,tas ugama jeedo lahjadaha dadka Somalida u dhaxeeya balse waxa aan ka hadlayaa waxa uu yahay qqabka higaada iyo adeegsiga oo qaldan.